RAHARAHA MAHAKASIKA OLONA AMBONY TEO ALOHA: Handalo ny Antenimieram-pirenena indray ireo dosie miisa 13 – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:43
Andrasana indray raha hahatratra ny fetrisa takiana ireo Depiote amin'ny fivoriana itambarambe manaraka.
Accueil/Politika/RAHARAHA MAHAKASIKA OLONA AMBONY TEO ALOHA: Handalo ny Antenimieram-pirenena indray ireo dosie miisa 13
RAHARAHA MAHAKASIKA OLONA AMBONY TEO ALOHA: Handalo ny Antenimieram-pirenena indray ireo dosie miisa 13
Anisan’ny iampangana ireo olona ambony teo aloha tafiditra ao anatin’ny dosie miisa 13 ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, ny famoaham-bola amina tsenam-barotra tsy misy akory « marché fictif », tsenam-barotra ahitana fandoavam-bola in-droa « marché double facture », sy ny sisa maro hafa. Hiverina handalo eny amin’ny Depiote ao anatin’izao fivoriana ara-potoana izao indray ny momba azy ireo, izay hanapahana, na hotohizana eny amin’ny Fitsarana Avo (HCJ) ny fanenjehana, na mijanona hatreo.
Antontan-taratasy mahakasika olona ambony miisa roa sisa no mbola tsy vita fanadihadian’ny vaomiera misahana ny fanenjehana olom-panjakana ambony ho eo anoloan’ny Fitsarana Avo (HCJ), eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, ao anatin’ireo antontan-taratasy am-polony voaray. Araka ny fanazavana, dia mpikambana teo anivon’ny parlemanta ireo olona roa tsy mbola vita fanadihadiana ireo, izay efa nampanantsoina omaly teny amin’ny Antenimieram-pirenena, miaraka amin’ny vavolombelona momba ny raharaha iampangana azy ireo, saingy samy tsy nisy tonga. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny vaomiera hatrany dia tsy mbola azo natao ny fanadihadiana ireo olona ireo teo aloha, noho ny mbola naha parlemantera azy ireo ka nananany ilay zo tsy azo enjehina.
Nambaran’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Fitsarana Avo anefa, ny Depiote Tsabotokay Honoré, fa tsy maintsy mamoaka fanapahan-kevitra ny vaomiera, ary hisy ny fehin-kevitra hangatahin’izy ireo haroso amin’ny lahadiniky ny Antenimieram-pirenena harafitra ny 6 desambra izao. Tsara marihina fa tsy maintsy mahafeno ny antsasa-manila ny solombavambahoaka tonga mivory vao manan-kery ny fanapahan-kevitra anolorana ireo olona ambony voarohirohy ireo eo anivon’ny Fitsarana avo (Haute Cours de Justice). Nanamafy ny fanentanana ny solombavambahoaka mba ho tonga maro hivory, araka izany, ny filohan’ny vaomiera, Tsabotokay Honoré, solombavambahoaka voafidy tao Vohipeno.
Tsy nampiraika ireo Depiote…
Tsara ho fantatra fa olom-panjakana ambony tamin’ny fitondrana teo aloha avokoa no voasaringotra amin’ireo antontan-taratasy voarain’ity vaomiera ity, avy amin’ny Bianco sy ny Pac. Anisan’ny iampangana azy ireo ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, ny famoaham-bola amina tsenam-barotra tsy misy akory « marché fictif », tsenam-barotra ahitana fandoavam-bola in-droa « marché double facture » eo koa ny fandraofana vola tsy misy antony mazava. Tsiahivina fa araka ny voalazan’ny lalàna, ity vaomiera manokana ity no misahana ny fandinihana sy fanaovana fanadihadiana momba ireo dosie ireo. Ary izy avy eo no manao tatitra eo anatrehan’ny fivoriana itambaram-ben’ireo depiote rehetra, hanapahana ny fandefasana ny raharaha hotsaraina eo anoloan’ny Fitsarana Avo na tsia.
Efa fivoriana ara-potoana maro no nolalovan’ity vaomiera manokana ity hatreto, saingy tsy nisy fanapahan-kevitra mbola noraisin’ny teo amin’ny fivoriana itambarambe mihitsy. Ny zavatra tsikaritra hatramin’izay dia toa tsy nampiraika ireo depiote akory ny handinika sy handray fanapahankevitra ny amin’izany fiampangana eo anoloan’ny HCJ izany. Raha tsiahivina, efa im-betsaka nahemotra ny fotoana hanaovan’ny Vaomiera manokana ny tatitra teo anatrehan’ny Depiote. Ny Alatsinainy 14 Desambra 2020, ny volavolam-pehi-kevitra laharana 66-2020, miampanga an’Atoa Reboza Julien no hany tokana dosie nanaovan’ny Vaomiera tatitra. Efa vita tamin’io andro io koa ny adihevitra rehetra mahakasika izany. Ny tsy fahatrarana ny fetrisa teo amin’ireo Solombavambahoaka anefa no tsy nahafahana nandray ny fanapatahan-kevitra momba ny fandefasana ny raharaha eny amin’ny Fitsarana Avo na tsia.
ADY AMIN’NY COVID-19: Nandresy isika, nahomby ny paikady
RANOBE TEO AMIN’NY KIANJA BAREA : Tsy ny fotodrafitrasa vaovao no olana, fa ireo famoahan-drano manodidina
LISI-PIFIDIANANA : Nahitana fiakarany 1,26% ny isan’ny mpifidy
ADY AMIN’I COVID-19 : Tafapetraka ny Foibe mandrindra ny Fitsaboana ny Covid-19 (PNGM)
FITSIRIHINA TAMPOKA : Taratasina fiara miisa 148 nosintonina tany Avaratry ny Nosy